1. Ny famonosana fanomezana vita amin'ny chylindrika dia endrika mahafinaritra iray hafa izay mety azo ampiharina amin'ny fety na amin'ny andro manokana, satria raha ny marina dia karazana fonosana maro no noforonina amin'ny endrika silipo toy ny boaty cookie, boaty sôkôla, sns. Betsaka ny olona no mety mieritreritra fa sarotra ny fomba famonosana fanomezana vita amin'ny valizy, saingy tsy izany velively.
2. Fanomanana hamboarina - Taratasy famonosana fanomezana - Hety - Fantsom-panafody mangarahara - Adhesive manify roa sosona - Ribbon fanomezana
3. Aparitaho ny taratasy fonosana ary apetraho ny fanomezana varingarina. Ampitahao ny haavon'ny tendron'ny tampon-taratasy mba hiditra ao anaty boaty.
4. Hetezo araka ny haben'ny boaty napetrakao tany am-boalohany ny taratasy. Amin'ny alàlan'ny fanapahana ny sisiny manaraka ny halavan'ny taratasy
5. Rehefa manana fonosana fanomezana mahitsizoro lava ianao dia apetraho mitsivalana eo afovoan'ny taratasy famonosana ilay boaty fanomezana misy varingarina. Ny lafiny iray manohitra ny sisin'ny taratasy mba hanomanana ny fonosana horonana.
6. Atombohy ny famonosana kasety mangarahara eo anelanelan'ny taratasy sy ilay boaty fanomezana.
7. Ary aforeto manodidina ny ilan'ny taratasy mba hanidiana ny boaty fanomezana. Tano mafy ny kasety mba tsy ho faty.
8. Aforeto aloha ny taratasy ambany mba hahazoana tsatoka tsara eo an-tampon'ny boaty. Izay tsy sarotra ny milalao fitia
9. Tazomy ny zoron'ny taratasy mifandona amin'ny lafiny iray, aforeto eo an-tampon'ny boaty ary asio kasety mangarahara.
10. Atombohy ny fakana ny zorony amin'ny alàlan'ny fanindriana ny horonan-taratasy amin'ny lalana iray ihany ary tsindrio mandra-pahatongan'ny volony mitovy habe aminy. Rehefa aforitra in-3-4, dia ampiasao kasety adhesive mazava mba hisorohana ny loosena. Tohizo ny fanaovana izany mandra-pahatongan'ny boaty iray manontolo.
11. Rehefa vita amin'ny tampony dia atodiho ny boaty mba hanao ny tena marina ambany. Aforeto tsara ireo paty.
12. Maneteza santimetatra vitsivitsy amin'ny fametahana roa sosona arakaraka ny haben'ny kofehy. Miraikitra ao ambadiky ny Bo Avy eo dia ento Bo ary apetraho eo afovoany na eo amin'ny faritra tianao ny tampon'ny boaty. Dia izay.
13. Tsy sarotra mihintsy ny fomba famonosana fanomezana vita amin'ny varingarina. Na dia akaiky kokoa ny vanim-potoanan'ny festival aza, raha te hanome fanomezana hanehoana fitiavana ianao Mikarakara ireo olona manodidina anao Avy eo dia mila fonosana fanomezana toy izao Avy eo andramo ampiasaina miaraka